China Ọrụ agbakwunyere ọrụ na nnọchite anya | Sunson
Jiri Aka Gi tinye Aka Onwe Gi!
1. Na-agbakwunye ntinye ahịa iji mee ihe na-atọ gị ụtọ ma jigide ndị ahịa gị.
2. ackghaghachi ngwaahịa gị na igbe ahaziri iche, n'ụdị ị masịrị gị.
3. Kitting na nzukọ welie gị ọkọnọ yinye na mfe nkesa usoro.
4. Lableling bụ usoro nsogbu ma dị mkpa ka anyị wee weghara ya maka gị, anyị na-etinye aha mmado n'ụzọ dabara adaba iji hụ na ngwaahịa gị.
Ọrụ Ntinye Aka
Na ahịa a na-aga ngwa ngwa, ebe usoro ndụ ndụ na-adị mkpụmkpụ ma ndị ahịa nwere ụdị dịgasị iche iche ịhọrọ, oge na-ahịa dị oke mkpa ma chọpụta mkpebi nke ụlọ ọrụ.
Ọrụ Sunsonexpress Supply Chain (SCS) na-enye ọrụ OEM (Original Equipment Manufacturers), ODM (Original Design Manufacturers), EMS (Electronic Manufacturing Manufacturers), na ndị na-emepụta ihe eletrọniki, na-enyere ha aka ịkwalite usoro ntinye ha. .
Dị ka onye na-ekesa ụwa, kredit anyị sara mbara na-enye ndị ahịa ahụmịhe "otu ụlọ ahịa" maka ụdị ha chọrọ na ntinye ya. Ọkachamara na ngwa ọrụ nke Ndị Ọrụ Ntanye anyị na-enye gị ohere belata ego gị zuru ezu nke inweta ihe onwunwe, mee ka isi obodo gị na-arụ ọrụ ma nwee ike ịnwe nnweta ihe dị iche iche, na-eme ka ahịa gị na uru gị dịkwuo elu.
Kwụ ụgwọ na ịzụta gị n'ụlọnga ọrụ
Anyị nwere ike ịnye gị ọrụ ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ n'efu.
1688.com/Taobao.com/jd.com ọrụ ụlọ ọrụ ịzụ ahịa
Anyị na-akpọtụrụ onye na-ere ere ma kpaa nkata ọrịre n'aha gị
Taobao.com na weebụsaịtị ndị ọzọ China anaghị anabata PayPal! Anyị na-ahapụ gị ka ị zipụ ịkwụ ụgwọ site na Paypal na anyị ga-akwụ ndị na-eweta ọrụ ịkwụ ụgwọ ndị China na-akwụ ụgwọ ọrụ ahụ! Inye gị nchebe ka ukwuu mgbe ịzụrụ n'aka ndị na-eweta ngwaahịa China!
N'iji ọtụtụ afọ anyị nwere ahụmịhe ịzụ ahịa taobao, anyị ga-adụ gị ọdụ maka ndaba nke ndị na-ere ahịa na ndụmọdụ ndị ọzọ Taobao.com tips
Anyị nwere ike inye zụọ, gị n'ụlọnga, nnyocha, zuru ụwa ọnụ mbupu nke ngwaahịa na a dragon elu àgwà ọrụ gị, Ọ bụla ethe kwukwara ọrụ gị ma ọ bụrụ na ị chọrọ.